From -DVB entertainment ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် အများပြည်သူလိုက်နာနိုင်ရန်
စေ ထုတ်ပြန် ထားသော ဆောင်ပုဒ်များအနက် “လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ဒို့ရန်သူ” ၊ “ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး” ၊ “သင့်သွေးဖြင့် အသက်ကယ်ပါ” ၊ “ကျန်းမာခြင်းသည်
လာဘ်တစ်ပါး” ၊ “သင့်ကြောင့် မီးမလောင်ပါစေနှင့်” ၊ “မီးသတိပြု” စသည့် ဆောင်ပုဒ်များစွာရှိပေသည်။ ၇.၈.၂ဝ၁၂ (အင်္ဂါ)နေ့တွင် “ရေ သတိပြု” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်တစ်ခု ထပ်မံထုတ်ပြန်ရမည့် အနေ အထားတရပ်သို့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီဟု ခေါ်ဆိုရတော့မည်။ အကြောင်း မှ မြန်မာနိုင် ငံတွင် မိုးရာသီဖြစ်သည်နှင့်အညီ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် အရပ် ဒေသအချို့၌
ရေကြီးခြင်း ၊ ရေလျှံခြင်း တို့ ဖြစ်ေ ပ်ါလျှက်ရှိ သည်။ ရေဘေးဒု က္ခ သည်များ၊ အိုး/
အိမ် ပစ်ရသည့် ဒုက္ခသည်များ၊ စားရေးသောက်ရေးခက်ခဲသူများ များစွာဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ သည်။ Read more »
8/08/2012 07:39:00 PM
၈၈၈၈ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ ငွေရတုအကြို ၂၄ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကဦးဆောင် ပြီး မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ အလယ်တိုက်ကြီး၊ ဒက္ခိဏာရာမဘုရားကြီးကျောင်းတိုက်မှာ ဒီကနေ့ ကျင်းပခဲ့ ကြပါတယ်။အခမ်းအနားအတွက်လိုအပ်တာတွေ မနေ့က ပြင်ဆင်နေတုန်း ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင်
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ အံ့သြစရာ အဖြစ်တခု ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းနဲ့ မီးရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းတို့ အခမ်းအနား Read more »
8/08/2012 06:59:00 PM
8/08/2012 06:57:00 PM
(မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် အိုဂျေး ကွင်တားနား ၏ ခြောက်ရက်ကြာ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများ သွားရောက်လေ့လာရန် ခွင့်တောင်းထားသည့် နေရာအချို့အား မြန်မာအစိုးရမှ ခွင့်မပြုခဲ့ဟု ကွင်တားနားက ပြောသည်။သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့က မဲဆောက်မြို့၌ မြန်မာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မစ္စတာကွင်တားနားက ထိုသို့ပြောကြားသွားခဲ့ကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သူ တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၀ဘ်ဆိုက်မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း အတွင်းက ဖြစ်ပွာခဲ့တဲ့ ဂျာနယ် ၂ စောင် အပိတ်ခံရ တဲ့သတင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြန်လည် ရှင်းပြထားတာပါ။ ဖတ်ချင်ရင် ဒီကို သွားပါ။
8/08/2012 04:53:00 PM
ယမန်နေ့က ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာအား အီဂျစ်၊ အာရပ်နှင့် အခြား မွတ်ဆလင် ဟက်ကာများ ပူးပေါင်း၍ တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြသည်ဟု နေပြည်တော် သတင်း တစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြ ထားပါသည်။Egyptians Hacker Group နှင့် Arabian Black Hat Team Hacker အပါအ၀င် မွတ်ဆလင် Hacker Group များ ပူးပေါင်း၍ တိုက်ခိုက် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်း Cyber Attack ပြုလုပ်လျှက် ရှိနေကြောင်း အဆိုပါ သတင်း၌ ဖော်ပြ ပါရှိ ပါသည်။Arabian Black Hat Team Hacker အဖွဲ့သည် ရုရှား၊ ဆီးရီးယား၊ အီဂျစ်နှင့်
အခြား အာရပ် နိုင်ငံများမှ မွတ်ဆလင် Hacker များ ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်း
8/08/2012 04:30:00 PM
8/08/2012 04:26:00 PM
!!!! ဘင်္ဂလီ-ရိုဟင်ဂျာတွေ မနေ့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘက် ဝင်ပြေးသွားတာ အခု ဘင်္ဂလား စစ်သားတွေ မမောင်းထုတ်ေ တာ့ဘူးတဲ့....လက်ခံနေပြီတဲ့....ဒီထက်ကောင်းတဲ့ သတင်းတ ခု က ရှေ့လမှာ OIC ဋ္ဌာနချုပ်ဆော်ဒီမှာ မူဆလင်နီုင်ငံများ ညီလာခံ လုပ်မယ်.....အဲဒီညီလာခံမှာ ထိုင်းတောင်ပိုင်းက အရေးရယ်....မြန်မာပြည်က ရိုဟင်ဂျာအရေးရယ် အဓိကဆွေးနွေးမယ် တဲ့....အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ရေမြောကမ်းတင် ဘင်္ဂလီတွေကို မူဆလင်နိုင်ငံများက တတ်နီုင်သလောက် ခွဲဝေလက်ခံဖို့ အချက် ကို တင်ပြသွားမယ်ဆိုပဲ့....ကျေးဇူးကမ္ဘာ အဘိုင် တို့.....မာမူတို့ရေ. .....မြန်မြန်နိုင် သလောက် မြန်မြန်သာ ခေါ်သွားကြပါ....ကျေးဇူးမေ့ပါဘူး.....(နေ့လည်ဘက် Thai PBS-ထိုင်းသတင်းမှ)
8/08/2012 04:19:00 PM
အစိုးရအဆက်ဆက်ကျူးလွန်ခဲ့သည့် အကျင့်ပျက်ခြ စားမှုများကို အရေးယူရန် အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးပါဝင်သော လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှု ပပျောက်ရေး ကော်မရှင် တရပ်ကို သမ္မတ ဦးသိန်း စိန်က ဖွဲ့စည်းသွား ရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။ အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်သော လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှု ပပျောက်ရေး ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော်တွင် မကြာမီ ဆွေးနွေး အတည်ပြုသွားမည် ဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လကုန်တွင် ဥပဒေအဖြစ် ထွက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
8/08/2012 03:39:00 PM
From - Lachid Kachin facebook (သြဂုတ်လ၊ ၈၊ ရက်)
8/08/2012 03:01:00 PM
8/08/2012 02:35:00 PM
8/08/2012 02:32:00 PM
8/08/2012 12:53:00 PM
ယနေ့ ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်း အဝေး တွင်ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည် သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဌများကို နေရာချထားသည့် လွှတ်တော်ထိုင်ခုံ များ ၏ ရှေ့ဆုံး တန်း သို့ ရောက်ရှိ လာ ခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို
ယမန်နေ့က ဖွဲ့စည်းခဲ့သောတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်း ကော်
မ တီ တွင် ဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန်ပေး ခဲ့ပါ သည် ။ At
8/08/2012 12:42:00 PM
ကမ္ဘာကျော် နိုင်ငံရေးဒဿနပညာရှင်၊ စာရေးဆရာ ပါမောက္ခ ဖရန်စစ်ဖူကူယားမားသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သြဂုတ်လ တတိယ အပတ်အတွင်း ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဖရန်စစ်ဖူကူယားမား သည် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ လေးရက် ကြာ လာရောက်မည်ြ ဖစ်ပြီး ရန်ကုန်နှင့်နေပြည်တော်တို့တွင် နှစ်ရက်စီ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်ပုံ နည်းလမ်းများနှ င့် ကောင်းမွန်သည့်အစိုးရ တစ်ရပ် တည်ဆောက်ရေး ဆိုင်ရာ စသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက် ပြီးဆွးနွေးပွဲများ ၊ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သမ္မတအကြံပေးအဖွဲ့ မှ နိုင်ငံရေး အကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင် ကပြောသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသည့် ''The End of History and the Last Read more »
8/08/2012 12:34:00 PM
8/08/2012 09:29:00 AM
From -RFAအဲဒီကလေးတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ ည (၉) နာရီက ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက် စည်ပင်လူကြီး ၆ ယောက်နဲ့ဆိုင်ကယ်စီးရဲ အယောက် ၂၀ လောက်က စည်ပင်အမှိုက်သိမ်းကားထဲမှာ စုပြုံထည့်ပြီး ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီး မိဘနာမည် မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ ကလေးတွေက ပြောပါတယ်။ပဲခူးတိုင်း ပြည်မြို့ မြကွမ်းတောင် ဘုရားဝင်းအတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ကရုဏာလက်များ ကွန်ယက် စာသင်ကျောင်းမှာ ပညာသင်နေတဲ့ အခြေအနေမဲ့ ကလေး အယောက် (၄၀) လောက်ကို ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းခေါ်သွားပြီး ပြည်မြို့နဲ့မိုင်(၁၀၀) ကျော် ဝေးတဲ့ ဥသျှစ်ပင် တောနက်ကြီးထဲမှာ သွားရောက် စွန့်ပစ်လိုက်တယ်လို့ RFA က စုံစမ်းသိရပါတယ်။
8/08/2012 08:51:00 AM
8/08/2012 08:46:00 AM
From -RFA ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တရားမဝင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အခြေချနေထိုင်သူ
အများစုဟာ တရုတ် လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး၊ အခုဆိုရင် တရားမ၀င် ၀င်ရောက်နေထိုင်တဲ့ တရုတ် လူ မျိုးေ တွ ထာင်နဲ့ချီ ရှိနပြီလို့ ကချင်ပြည်နယ်
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဋ္ဌာနက ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ လတ်တလော ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း နယ်မြေမလုံခြုံမှုကြောင့် တရားမ၀င် ခိုးဝင်နေထိုင်သူတွေကို ကြပ်ကြပ် မတ်မတ်ဖော်ထုတ် စစ်ဆေးအရေး ယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးတဲ့ အတွက်
အနီးစပ်ဆုံးသာ ခန့်မှန်းပြောဆိုရတာ ဖြစ်တယ်လို့ အဲ့ဒီဋ္ဌာနရဲ့ ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးကြည်လင်က အခုလ (၄) ရက်နေ့က မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့တာပါ။
8/08/2012 08:42:00 AM
ရခိုင်ပြည်နယ်က မူဆလင် ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာအစိုးရက လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုတွေ ကျူးလွန်နေတယ်လို့ ဆော်ဒီ အာရေးဗီးယား အစိုးရက မနေ့က စွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဆော်ဒီအစိုးရ အဖွဲ့ရဲ့ သဘောထားကို အစိုးရသတင်းဌာန
SPA က ပြောဆိုရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံက မူလဆင် ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာအစိုးရက ရက်စက်စွာ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိနေပြီး၊ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုတွေ ကျူးလွန်နေကြောင်း ၊ ဆော်ဒီအစိုးရ အနေနဲ့ ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချကြောင်း ပြောဆိုတယ်လို့ သိရပါတယ်။
8/08/2012 08:39:00 AM
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ အတွင်း ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင် များ သေ ဆုံးခဲ့ရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လေးနက်စွာ စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ပါကစ္စတန်သမ္မတ Asif Ali Zardari က မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ အင်္ဂါနေ့က စာရေးသား ပေးပို့လိုက်သည်။သမ္မတ Zardari ၏ စာထဲတွင် ပြန်လည်နေရာချထားရေး လုပ်ငန်းစဉ်အား မြန်မြန်ထက်ထက် ဆောင်ရွက်ရန်တောင်းဆိုထားပြီး
သို့မှသာ ရိုဟင်ဂျာများ ၎င်းတို့ နေအိမ်များသို့ ပြန်သွားကာ လုံခြုံစိတ်ချရ သည့်ဘဝသို့ ရောက်ရှိစေ မည်ဟု ပါရှိကြောင်း ပါကစ္စတန် အေပီ သတင်း တပုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
8/08/2012 08:33:00 AM
8/08/2012 08:32:00 AM
ရန်ကုန်မီဒီယာဂရုပ် ပရိတ်သတ်များခင်ဗျား ရန်ကုန်မီဒီယာဂရုပ်ရဲ့ website www.yangonmedia.com
ဟာ ဒီနေ့မှာ အခြားသော အွန်လိုင်း hacker များရဲ့ attack လုပ်ခြင်းကို ခံရပါတယ် သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့ website ကို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ များပြန်လည်လုပ်ဆောင် နေခြင်း ဖြစ်တဲ့အတွက်
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ခေါ်ယူကြည့်ရှု၍ မရနိုင်သေးကြောင်း (ရံဖန်ရံခါရလိုက်မရလိုက်ဖြစ်နေပါသည်) လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါတယ် အမြန်ဆုံးအသုံးပြု၍ ရနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ယခုဖြစ်ပေါ်မှု သည် “ကုလသမဂ္ဂ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် ကွင်တားနား၏ ရခိုင်အရေးသုံးသပ်ပြောဆိုချက်များ လုံးဝလက်မခံ” ဟူသည့် Read more »
8/08/2012 08:19:00 AM
01B MAHASEN ရဲ့ ပြည်တော်ဝင်... မုန်တိုင်းသတင်း၊ ၁၄-၅-၂၀၁၃ ၁၄-၅-၂၀၁၃ ရက် တနင်္လာနေ့ အင်္ဂါနေ့ နံနက် (၀၀း၃၀)နာရီအထိတော့ ခန့်မှန်းတဲ့ အတိုင်းဖြစ် မလာသေးပါ။ အဆိုတော် ရဲလေး နှင့် သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း၏ တစ်ဦးတည်းသောသမီးဖြစ်သူ မအေးမြအောင် တို့ မင်္ဂလာဆောင်မည်
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း MAHASEN သည်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်း သို့ ဖြတ်သန်းမည်။ သို့ဖြစ် ပါ၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှိ မင...
From...Eleven စိန်စု လမ်းစဉ်နှင့် ဒီမိုကရေစီ အနာဂတ် (၁)